China na-arụ ọrụ trouser ikpere na mpe mpe akwa ubi na ụlọ ọrụ na-agba egwu | AoFeiTe
Njirimara:Nlekọta Ahụike, Ume Na-eku ume mgbe niile
Ihe:Polyester, Lycra Fabric (naịlọn / polyester)
Ụdị:Egwuregwu Bọọlụ Nkata Nkwado ikpere
Agba:Black White Red Purple Yellow Blue
Product aha:Egwuregwu Bọọlụ Nkata Nkwado ikpere
Akwụkwọ:OA, FDA, ISO9001, ISO13485
Ọrụ Trouser Ikpere ikpere Ubi na Dance
Na-arụ ọrụ trouser ikpere na mpe mpe akwa. Na-enye nkwado maka patella gị, Nkasi obi iyi, Ikike na-agbanwe akụkụ anọ agaghị emetụta mmegharị gị. The ezi mkpakọ nwere ike ime ka gị na ikpere kpuchie kpamkpam elu mgbanwe na-anwụ ngwa kwa ụbọchị na-eyi. Ikpere ikpere ubi. Ọla kọpa nwere ihe na-egbochi fungal na antibacterial. Ọla kọpa bụkwa ihe dị mkpa dị mkpa maka ọrụ nkịtị nke ọtụtụ anụ ahụ na ọ dị mkpa maka ọgbọ nke ọhụụ na akpụkpọ ọhụrụ. Akpụkpọ anụ mmadụ anaghị eche banyere ọla kọpa na ihe ize ndụ nke mmeghachi omume na-adịghị mma n'ihi ikpuchi ikpuchi ọla kọpa dị ala. Ikpere ikpere agba egwu. Ugbu a, mgbe oge 40 gachara akwa ahụ, ma debekwa ọdịnaya ion ọla kọpa nke 4000ppm, nke a gosipụtara site na ITS.And na akụkọ nyocha ọdịnaya na nsonaazụ nje bụ ihe karịrị 99.99%. Nye nkwado maka mgbatị akwara, mgbu na mgbu. Mee ngwangwa mgbake nke akwara na nkwonkwo. Uwe na-amịkọrọ mmiri ngwa ngwa iji zere chafling na rashes. Anti-nje na mgbochi isi.
Achọ ezigbo Work Trouser ikpere Kedo akwa Manufacturer & soplaya? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. Ogige Mkpịsị Mkpịsị Aka niile nwere nkwa dị mma. Anyị bụ ụlọ ọrụ China nke Knee Pad Dance. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Omenala xxxl ikpere nkwado nkwado aka uwe mma
ikpere aka uwe nkwado nkwado na eriri egwuregwu nkwonkwo
Uwe na-akwado nkwado ikpere ụkwụ
Ime Anwansi Anwansi Anwansi High Quality Kneecap